जब जीवनले तपाईलाई रोक्नको लागि सयौं कारण दिन्छ, जीवन देखाउनुहोस् कि तपाईसँग हाँस्न र हाँस्नका लागि लाख कारणहरू छन्। बलियो रहनुहोस्। - बेनामी - उद्धरण प्याडिया
जीवन कहिल्यै सहज हुँदैन। तपाईंसँग टुक्रिने, बिग्रिएको महसुस गर्ने र रुने प्रशस्त कारणहरू छन्। यद्यपि यो कुरा निश्चित गर्नुहोस् कि तपाई आफैले आफूलाई जीवनको दु: ख र समस्याहरूमा परेर बस्न दिनुहुन्न।
जीवनले तपाईंलाई सयौं कारणहरू पछाडि फर्काउनेछ, यस्तो महसुस गर्नुहोस् जस्तो लाग्छ तपाईले पहिले जति नै हराउनु भएको छ, तर निश्चित गर्नुहोस् कि तपाई त्योभन्दा धेरै माथि उठ्नु भएको छ!
तपाईंले केवल जीवनको नकरात्मकताहरू हेर्नु हुँदैन, तर साथै तपाईंलाई के भइरहेको छ भन्ने सकारात्मक चीजहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। वरपर हेर्दा, तपाई मुस्कान र हाँस्ने प्रशस्त कारणहरू पाउनुहुनेछ! दु: ख को बारेमा तनाव गर्नुको सट्टा तिनीहरूलाई छान्नुहोस्।
हाम्रो दृष्टिकोणमा थोरै फरकले हाम्रो जीवनको लागि चमत्कार गर्न सक्छ। यो हाम्रो लागि बलियो रहन महत्त्वपूर्ण छ। जीवनको आफ्नै उतार-चढाव हुन्छ।
त्यहाँ केही क्षणहरू हुन्छन् जब तपाईं पूर्ण रूपमा बिग्रिएको महसुस गर्नुहुन्छ, र त्यसपछि त्यहाँ परिस्थितिहरू हुनेछ जब तपाईं उठेको जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ, र राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ, मुस्कुराउँदै हुनुहुन्छ, र तपाईंको मुटुलाई हाँस्नुभयो।
सकारात्मक पक्षहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न खुसी हुनुहोस्, र नकारात्मक आयामहरूबाट आफूलाई पुनःप्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। एकचोटि तपाईंले यो गर्नुभयो भने, तपाईंले यस्तो कल्पना गर्नुहुनेछ कि जीवन यति सहजै भएको छ जुन तपाईं सोचेको भन्दा कहिल्यै कम भएको छ!
बलियो हुनुहोस्, र काम जारी राख्नुहोस्। आफ्नो विचार परिवर्तन गर्नुहोस् थोरै प्रशोधन गर्नुहोस्, र तपाईंले आफ्नो वरिपरि हुने राम्रा चीजहरू पाउनुहुनेछ।
बलियो उद्धरण हुनुहोस्
बलियो उद्धरण छविहरू हुनुहोस्
बलियो उद्धरण हुनु
जीवनको बारेमा महत्वपूर्ण उद्धरण
जीवन र खुशीको बारे प्रेरणादायक उद्धरण
जीवन को बारे मा सही उद्धरण
कडा र खुशी हुनु बारे उद्धरण
बलियो उद्धरण रहनुहोस्
जीवनको बारेमा बलियो उद्धरण रहनुहोस्
बलियो उद्धरण रहँदै
कडा र बहादुर उद्धरण
कडा जीवन उद्धरण
बलियो मान्छे उद्धरण
जीवनको बारेमा कडा उद्धरण
सब भन्दा बलियो उद्धरण
बलियो उद्धरण हुन प्रयास गर्दै
जीवन तपाईको समयको बर्बाद गर्नको लागि धेरै छोटो छ तपाईको साथ बिचार गर्ने जसले तपाईलाई सहि व्यवहार गर्दैन। - बेनामी
जीवन तपाईको समय बर्बाद गर्न को लागी तपाईको साथ सहि व्यवहार नगर्ने कसैको बारेमा छोटो छ। - बेनामी ...
चीजहरू राम्रो हुनको लागि प्रतीक्षा नगर्नुहोस्। जीवन सधैं जटिल हुनेछ। अहिले नै खुसी हुन सिक्नुहोस्, अन्यथा तपाईं समय समाप्त हुनुहुनेछ। - बेनामी
चीजहरू अझ राम्रो हुनको लागि तपाईंले कहिले पनि पर्खनु हुँदैन। जान्नुहोस् कि जीवन सधैं जटिल हुन्छ, र तपाईं सक्नुहुन्न ...
सबै कुरा तपाईलाई सही समयमा आउँदछ। धैर्यवान हुनुहोस्। तपाईंको समय आउनेछ। - बेनामी
कहिलेकाँही तपाई रिसाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईको पक्षमा कुराहरु बदलेको छैनन। सबै होइन…
कसैलाई पत्ता लगाउनुहोस् जो तपाईंलाई भएकोमा गर्व गर्दछ, तपाईंलाई हराउन डराउँछ, तपाईंको लागि झगडा गर्दछ, तपाईंलाई कदर गर्दछ, तपाईंलाई आदर गर्दछ, तपाईंको हेरचाह गर्दछ, र तपाईंलाई बिना शर्त माया गर्दछ। - बेनामी
आजका दिनहरुमा इन्टरनेट र कनेक्टिविटी यति खिलिएको छ कि एक लाई जीवन साथी पनि पाउन सक्छ ...